Ny postdemocracy mankany Crouch | safidy
ny Veronika Janyrova 25. Janoary 2016, 13: 17 8.7k Views
Eo ambanin'ny foto-kevitra momba ny demokrasia, ny sosiolojia anglisy sy ny mpahay siansa politika Colin Crouch dia nanoritsoritra ny asa nampanaovina azy tamin'io anarana io ihany hatramin'ny taona 2005 modely demokrasia izay be loatra no nahatonga ny mpahay siansa politika any Eropa sy Etazonia nanomboka tamin'ny fiafaran'ny taona 1990er. Anisan'izany ny fitomboan'ny hery ara-politika ananan'ireo mpandraharaha ara-toekarena sy ny fikambanan'ny hery ambony, ny fitomboan'ny fihanaky ny firenena, ary ny fahavoazan'ny olom-pirenena mandray anjara. Crouch dia namintina ireo trangan-javatra ireo ho foto-kevitra - aorian'ny demokrasia.
Ny tesisikan'izy ireo fototra dia ny fanapahankevitra politika amin'ny demokrasia tandrefana dia mihamitombo hatrany ary voamarina ara-drariny amin'ny tombotsoan'ny toe-karena sy ny mpisehatra. Mandritra izany fotoana izany, ny tsangam-pahefana amin'ny demokrasia, toy ny soa iombonana, ny fahalianana ary ny fifandanjana ara-tsosialy ary koa ny fahatapahan-tenan'ny olom-pirenena dia fongana tanteraka.
Ny fivoaran'ny parabola demokrasia maoderina aorian'ny Crouch.
Colin Crouch, teraka 1944 tany Londres dia mpahay siansa politika sy anglisy. Miaraka amin'ny asany amin'ny diagnostika amin'ny post-demokrasia sy ny boky eponymous, dia nanjary nalaza teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izy.
Ny rafitra politika taorian'ny demokrasia nofaritan'i Crounch dia aseho amin'ireto zavatra manaraka ireto:
Ny demokrasia faneso
Amin'ny fomba ofisialy, andrim-panjakana demokratika sy fomba fiasa dia tazonina amin'ny alàlan'ny demokrasia, ka tamin'ny voalohany dia heverina ho tsy mivaona ny rafitra politika. De facto, na izany aza, ny fotokevitra demokratika sy soatoavina dia miha-zary mihalehibe, ary lasa rafitra "demokrasia mihomehy amin'ny rafitry ny demokrasia feno ny demokrasia feno".
Antoko sy fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana
Ny politika sy ny fampielezan-kevitry ny antoko dia mihalehibe amin'ny votoatiny izay mamolavola ny politikam-panjakana. Raha tokony hiadian-kevitra momba ny votoaty politika sy ny fifandimbiasana dia misy paikady fampielezan-kevitra manokana. Lasa fandalovan'ny tena politika ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana, raha ny politika no misy ao ambadiky ny varavarana mihidy.
Ny antoko dia manatanteraka betsaka ny anjara asan'ny fifidianana ary lasa tsy mitombina, satria ny asan'ny mpanelanelana eo amin'ny olom-pirenena sy ny mpanao politika dia mihamitombo ho an'ny andrim-pikarohana hevitra. Fa kosa, mifantoka amin'ny fanomezana tombontsoany manokana na birao ny mambra.
Ny soa iombonana
Ny votoatin'ny politika dia mivoatra hatrany amin'ny fifaneraserana eo amin'ireo mpisehatra politika sy toekarena izay mandray anjara mivantana amin'ny fanapahan-kevitra politika. Tsy mifantoka amin'ny sehatry ny fiantohana izy ireo, fa manompo tombony sy fampitomboana ny feo indrindra. Ny soa iombonana dia azo tsara indrindra ho toekarena mandroso.
Ny haino aman-jery ihany koa dia miasa amin'ny lojika ara-toekarena ary tsy afaka mampiasa ny anjara toerany demokratika ho fahefana fahefatra ao amin'ny fanjakana intsony. Ny fifehezana ny haino aman-jery dia eo am-pelatanan'ny vondron'olona vitsivitsy izay manampy ireo mpanao politika hamaha ny "olan'ny serasera ifadian-kanina".
Ny olom-pirenena tsy miangatra
Ny olom-pirenena dia tsy kivy amin'ny modely Crounchs. Na dia misafidy ireo solontena politika aminy aza izy ireo, tsy vitan'ny miaro ny tombotsoany amin'ity rafitra politika ity intsony izy ireo. Raha ny fitsipika, ny olom-pirenena dia mitana andraikitra mangina sy tsy mifangaro. Na dia afaka manatrika ny haino aman-jery ara-media amin'ny haino aman-jery aza izy, dia sahirana eo amin'ny lafiny politika mihitsy.
Toe-karena ny fiaraha-monina
Ny hery manosika hetsika ara-politika, araka ny voalazan'i Crouch, dia tombony ara-toekarena marobe izay nasehon'ny elite sosialy manankarena. Tao anatin'ny taona vitsivitsy lasa izay, dia afaka nametraka fomba fijery neoliberal eraky ny faritra midadasika amin'ny mponina, izay manamora ny fampahafantarana ireo tombotsoany. Efa zatra ny kabary neoliberal ny olom-pirenena, na dia mifanohitra amin'ny tombontsoany manokana sy ny filàzany aza izy ireo.
Ho an'i Crounch, ny neoliberalisme dia sady antony no ampiasain'ny fitomboan'ny paositra.
Na izany aza, tsy hitan'i Crouch mazava tsara io fomba fiasa io fa tsy demokratika, satria ny lalàna mifehy sy ny fanajana ny zon'olombelona sy ny sivily dia mitoetra hatrany. Miaiky fotsiny izy ireo fa tsy hery entin'ny politika intsony izy ireo ankehitriny.
Na izany aza, tsy hitan'i Crouch mazava tsara io fomba fiasa io fa tsy demokratika, satria ny lalàna mifehy sy ny fanajana ny zon'olombelona sy ny sivily dia mitoetra hatrany. Miaiky fotsiny izy ireo fa tsy hery entin'ny politika intsony izy ireo ankehitriny. Nohazavainy ny fatiantoka tsikelikely momba ny kalitao izay niainan'ny demokrasia tandrefana tamin'ny fahitany azy, tamin'ny fanalavirana ny fitsipiky ny demokratika amin'ny fandraisana anjara sivika ary ny politikam-pampianarana natao ho an'ny soa iraisana, ny tombontsoany ary ny fidirana ara-tsosialy.
Ny tsikera ny modely alohan'ny demokrasia momba ny siansa politika dia tena samihafa sy feno fatratra. Narahina, ohatra, manohitra ny "olom-pirenena tsy miangatra" navoakan'i Couch, izay manohitra ny firoboroboan'ny firaisankina sivika. Lazaina koa fa ny demokrasia dia "resaka elitiste" ary efa hatrizay. Modely demokrasia modely, izay mety ho voafetra ny fitarihan'ireo elita ara-toekarena ary mety ho tsy nisy mihitsy ny olom-pirenena rehetra. Tsy vitan'ny hoe, ny fahalemena lehibe amin'ny foto-keviny dia hita amin'ny tsy fisian'ny fototra empirisika.
Modely demokrasia modely, izay mety ho voafetra ny fitarihan'ireo elita ara-toekarena ary mety ho tsy nisy mihitsy ny olom-pirenena rehetra.
Na izany aza, Crouch, ary miaraka aminy ny siansa mpahay siansa politika iray manontolo any Eropa sy Etazonia, dia mamaritra ny zavatra mitranga isan'andro eo imasontsika. Ahoana no azo anazavana azy fa ny politika neo-liberaly - izay nanosika toekarena eran-tany manohitra ny rindrina, manambara volam-panjakana handrakofana ny fatiantoka amin'ny sehatra tsy miankina, ary mbola mitombo ny fahantrana, ny tsy fisian'ny asa, ary ny tsy fitoviana ara-tsosialy - tsy efa nifidy hatrizay?
Ny fanontaniana momba ny fihoaran'ny demokrasia tany Aotrisy dia efa zava-misy iainan'i Wolfgang Plaimer, mpiara-miasa taloha teo amin'ny Oniversite Johannes Kepler Linz. Araka ny voalazany, manana zo maro i Crouch mifandray amin'ny demokrasia Australiana. Ho fanamarihana manokana, ny fifandimbiasan'ny fanapahan-kevitra politika avy amin'ny firenena mankany amin'ny ambaratonga ambony iray dia manamafy ny fironana aorian'ny demokrasia ao amin'io firenena io. Tahaka izany koa, araka ny voalazan'i Plaimer, ny fiovana eo amin'ny vahoaka mankany amin'ny toekarena sy ny renivohitra, ary koa ny sampana mpanao lalàna mankany amin'ny sampana mpanatanteraka. Ny fanakianana an'i Ploucher momba ny modely nataon'i Crouch dia niresaka momba ny fanatsarana ny fanjakan'ny fifanampiana ho "heyday of demokrasia": "Ny fankalazana ny demaokrasia ao amin'ny fanjakan'ny fiahiana ary ny fanamafisana ny fihoaran'ny demokrasia ankehitriny dia mampivadika," hoy i Plaimer, nanazava izany amin'ny ampahany miaraka amin'ireo doka demokratika marobe. izay efa tao amin'ny 1960er sy 1070er any Aotrisy.
Prof. Reinhard Heinisch, filohan'ny vondrona mpahay siansa politika Future of Democracy sy ny Departemantan'ny Politikan'ny Politika ao amin'ny Oniversite Salzburg, dia mahita marika koa amin'ny polemika ao amin'ny foto-kevitra postdemokrasia Crouch ary tsy mahatsapa ny porofon'ny fisian'ireo zava-mitranga naoriny. Ankoatr'izay, hitany ny postdemokrasia Crouch'sche fa nonina tamin'ny tontolo Anglo-Saxon. Na izany aza, tsy midika akory izany fa ny teboka momba ny tsikera voamarina dia tsy manan-kery ho an'i Aotrisy.
Heinisch dia mahita ny antsoina hoe demokrasia carte antsoina hoe defra manokana an'ny demokrasia Australiana. Ity dia carte quasi-carte izay natsangana ara-politika, miaraka amin'ireo antoko mifehy nandritra ny am-polony taona maro izay nampidirina tamin'ny fomba feno ny fizarana ireo lahatsoratra tao amin'ireo manampahefana ho an'ny daholobe, ny haino aman-jery ary ireo orinasam-panjakana. "Ireo rafi-pahefana miorina ity dia mamela ny roa tonta tsy miankina amin'ny sitrapon'ireo mpikambana sy ny ankamaroan'ny mponina mba hitantana," hoy i Heinisch.
Mampahatsiahy antsika i Crouch fa tsy misy dikany ny demaokrasia mivaingana ary ny fandinihana akaiky azy angamba. Noho izany, raha mandà ny "spinter of post-demokrasia" isika ka miaina ao amin'ny demokrasia iray izay mizotra mankany amin'ny soa iraisana, fifandanjana amin'ny tombontsoany ary fitoviana ara-tsosialy, ary izay tena nipoahan'ny lalàna avy amin'ny olom-pirenena, dia ilaina tokoa ny mampiasa azy io.
Famaranana amin'ny paositra demokrasia taorian'ny Crouch
Na ny post-demokrasia taorian'ny famaranana an'i Crouch dia azo haamarina avokoa na azo ampiharina amin'i Aotrisy na tsia - ny tsy fahampiana demokratika koa dia tsy misy any Alemana. Na ny fanalefahana ny parlemanta ho an'ny governemanta federaly na ny an'ny "solontenan'ny vahoaka" mankany amin'ny antokon'ny fety, ny tsy fisian'ny fitsapan-kevi-bahoaka na ny tsy fisian'ny fangaraharana ireo fanapahan-kevitra politika sy ny fahaiza-manao.
Ny fahatsapan-tena ihany koa dia mety ho hery manosika ny hetsika demaokrasia marobe izay miasa any Aotrisy, ho an'ny fanitarana ara-dalàna ary noho ny fampiakaran'ny fampitaovana mivantana ny demaokratika. Amin'ny maha olon'ny demokrasia antsika dia tokony afaka mangataka sonia isika, manohana ireo hetsika ireo amin'ny alàlan'ny fotoanantsika, herintsika, na fanomezana, na farafaharatsiny mba hampita ny eritreritr'izy ireo sy ny fitakian'izy ireo amin'ny tontolo iainantsika.
Previous article SIDA
Lahatsoratra manaraka Fiainana eo amin'ny Mars - Mialà amin'ny fonenana vaovao
Fiainana eo amin'ny Mars - Mialà amin'ny fonenana vaovao